Taon-jobily : fanokafana | FJKM Amboniloha
Taon-jobily : fanokafana
Ny Alahady 12 Janoary 2014 dia nosokafana tamin’ny fomba manetriketrika ny Fankalazana ny Jobily faha-150 taona. Ny Prezidà Synôdaly SPAA 10 (Synôdam-Paritany Antananarivo Andrefana), ny Mpitandrina RAHAINGONJANAHARY Rodolphe, no nanatanteraka izany niaraka tamin’ny fanokanana ny takela-bato fahatsiarovana sy ny « maquette » hitarafan’ny daholobe ny ho endriky ny fiangonana aorian’ny fanitarana ny rihana.
Nisy ny « vary be menaka » taorian’ny fanompoam-pivavahana mba ho famporisihana sahady ny mpino amin’ny adidy sy andraikitra makadiry miandry azy ireo, sady ho fisaorana ireo solon-tenan’ny Fiangonana 4 trano manodidina tonga nanatrika ny fotoan-dehibe.
Catégories :	> Fanokafana, Faha-150 taona, Rafitra	/ par hrakotomalala 14 mai 2014
Fifidianana Diakona 2015 : ireo vehivavy voafidy
Noho ny fitahian'ny Tompo dia tanteraka soa aman-tsara ny fifidianana Diakona ny Alahady 17 May 2015 teo. Marihina fa handray andraikitra...
Non classé, Rafitra, Slide In Home ... , vaovao	Lire la suite
Fifidianana Diakona 2015 : ireo lehilahy voafidy
Notanterahina ny Alahady 26 Aprily 2015 ny fanavaozana ny Birao sy ny fanendrena ireo tompon'andraikitra ao amin'ny Fikambanana...
Non classé, Rafitra, Slide In Home ... , Lire la suite
Tsiahy faha-150 taona an-tononkalo
Misaotra an'Andriamanitra isika rehetra noho ny nahatratrarantsika ny Ivon'ny Fankalazana ny faha-150 taona. Raha tadidintsika anefa...